Ngelinye ilanga ngo-Ephreli 2000, ngenkathi ngihlela kahle izingubo, ngathola isikhwama somyeni wami. Ngaqaphela ukuthi sasiqumbile, ngakho ngavula uziphu ngenxa yokulangazelela ukwazi ngase ngibona ukuthi kwakuneBhayibheli nencwadi yamaculo ngaphakathi. Kwakukhona futhi nencwadi entsha eyayikhaviwe ngekhava yangaphandle. Ngazicabangela ngathi: “Kungani ngingakaze ngiyibone le ncwadi ngaphambilini? Kufanele ukuthi incwadi ethile yokubheka kuyo abashumayeli, noma yincwadi equkethe okuhlangenwe nakho kwabantu abakholwayo. Kufanele nakanjani ngiyifunde, mhlawumbe ngingathola ukusizakala kuyona.” Ngiholwa ukulangazelela kwami, ngabona isihloko esasithi, “Labo Abazokwenziwa Baphelele Kufanele Babhekane Nokucwengwa.” “Saze sasisha futhi sangajwayeleka isihloko!” ngacabanga, “Ngokubuka nje isihloko sakhona, ukucwengwa akuyona into embi! Njengamanje ngisesimweni sokucwengwa okungaphezu kwamandla ami, ngakho kufanele ngithole ukuthi uhlangabezana kanjani ngokucwengwa futhi ngalokho ngingathola indlela yokuzilolonga.” Ngaleso sikhathi, ngaqala ukufunda: “Kwakuvame ukuthiwa bonke abantu bayofunga phambi kukaNkulunkulu bathi: ‘Akunandaba ukuthi ubani ongamthandi uNkulunkulu, kumele ngimthande Yena.’ Kodwa manje, ubhekene nokucwengwa. Akuhambisani nemibono yakho, ngakho uphelelwa ukholo kuNkulunkulu. Ingabe lolu uthando lweqiniso? Usufunde kaningi ngezenzo zikaJobe—ingabe usuzikhohliwe? … Lapho uhlupheka kumele ukwazi ukungacabangi ngenyama futhi ungakhonondi ngoNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ezifihla kuwe, kumele ukwazi ukuba nokholo lokumlandela, uphinde ube nothando owawunalo ekuqaleni, ungaluvumeli lube ntekenteke noma lunyamalale. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani, kumele uhloniphe uhlelo Lwakhe, ukulungele ukuqalekisa inyama yakho kunokukhononda Ngaye. Lapho ubhekene nezilingo, kumele wanelise uNkulunkulu naphezu kokunqikaza ukuzihlanganisa nokuthandayo, noma ukukhala kabuhlungu. Yilokhu kuphela okungabizwa ngokuthi uthando lweqiniso nokholo. Akunandaba ukuthi isimo sakho sangempela siyini, kumele uqale uzimisele ukubekezelela ubunzima kanye nokholo lweqiniso, futhi kumele uzimisele ukulahla inyama. Kufanele uzimisele ukubekezelela ubunzima nokulahlekelwa izinto ozithandayo ukuze ufeze intando kaNkulunkulu. Kumele uphinde ube nenhliziyo yokuzisola, ukuthi awukwazanga ukwanelisa uNkulunkulu phambilini, futhi ukwazi ukuzisola manje. Akukho nokukodwa kulokhu ongakuntula futhi uNkulunkulu uyokupheleliswa ngalezi zinto. Uma untula le mibandela, awunakupheleliswa.” La mazwi ayithinta ngempela inhliziyo yami. Ngangifunda ngikhala ngesikhathi esifanayo, njengoba la magama ayekhuluma ngesimo sami ngqo. Ngaphambilini nganginqume ukuzinikela mina nomyeni wami eNkosini. Ngangihlala ngenelisekile ngokuphelele ukubhekana nayo yonke imithwalo yekhaya ukuze ngeseke umyeni wami emsebenzini ayewenzela iNkosi ngaphandle, kungakhathaleki ukuthi kwakubuhlungu noma kukhathaza kangakanani. Kodwa-ke, ngenxa yobunzima ekhaya nokungakhathali komyeni wami, ngangihlale nginomuzwa wokuthi ngiphathwe kabi, ngihlala esimweni sokubhekana nokucwengwa, futhi ngalahlekelwa ukholo kanye nothando engangikade nginalo ekuqaleni. Ngangingakwazi ukugcina isinqumo engangisenze phambi kukaNkulunkulu, futhi ngangivame ukukhala ngingedwa ngasese. Ngacabanga ngokuthi uJobe wayekwaze kanjani ukufakazela uNkulunkulu phakathi kwesilingo esikhulu futhi esinzima, nokungalahli ukholo kuNkulunkulu, futhi wayeze wathi, “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama likaJehova” (UJobe 1:21). Ngangingakukhohlwa kanjani lokho? Ngabe sengizisola kakhulu ngakho konke engangikwenzile phambi kukaNkulunkulu: UJobe wayencamela ukuzwa ubunzima futhi alahlekelwe yizinto azithandayo kodwa nokho akwazi ukwenelisa uNkulunkulu. Ngase ngikholwe eNkosini iminyaka eminingi impela, kodwa ngase ngilahlekelwe ukholo eNkosini. Ngakhononda eNkosini ngenkathi ngibhekene nokucwengwa, futhi yikuphi lapho ngangibonise khona uthando ngeNkosi na? Nginalokhu engqondweni, ngenza isinqumo ngedwa, ukuthi ngangingeke ngisakwazi ukufana nalokhu engangiyikho ngaphambili, ukuthi ngangizokweseka umyeni wami emsebenzini ayewenzela iNkosi, nokuthi kwakufanele ukuba ngibhekane nokuhlupheka okuthile.
Ngelinye ilanga, ngenkathi ngipheka, ngangilokhu ngilalela ngibuye ngingalaleli iculo elalidlalwa ngumyeni wami, “Ngubani ongamangali ngalokhu? Ngubani ongalangazeleli ukubona uNkulunkulu? UNkulunkulu usechithe iminyaka phakathi kwabantu, kodwa umuntu akakuboni nhlobo lokhu. Namuhla, uNkulunkulu uqobo usebonakele ukuze avuselele uthando Lwakhe oludala nomuntu. Emva kokusuka eJudiya, uNkulunkulu wanyamalala akwasala mkhondo. Abantu balangazelela ukumbona futhi, kodwa abakaze balindele ukuhlangana Naye futhi lapha nanamuhla. Kwakungenzeka kanjani lokhu kungabuyisi izinkumbulo zakudala? Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, uSimoni indodana kaJona wahlangana neNkosi uJesu, futhi wadla neNkosi etafuleni elilodwa. Iminyaka yokulandela yajulisa uthando lwakhe Ngaye. Wayethanda uJesu ekujuleni kwenhliziyo yakhe. UNkulunkulu usechithe iminyaka phakathi kwabantu, kodwa umuntu akakuboni nhlobo lokhu. Namuhla, uNkulunkulu uqobo usebonakele ukuze avuselele uthando Lwakhe oludala nomuntu, ukuze avuselele uthando Lwakhe oludala nomuntu” (“Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Amazwi aleli culo avuselela imicabango yami futhi angivusela imizwa yokulangazelela ukubuya kweNkosi. Ngakhala njengalokhu ngangilalele, futhi ngazicabangela ngathi: “Selokhu ngaqala ukukholwa eNkosini, ngangicabanga ngeNkosi uJesu zonke izinsuku, futhi ngethemba ukuthi ingabuya masisha ukuze ngikwazi ukuyixoxela izindaba zezikhathi esezadlula. La mazwi ayeqinisile ngempela futhi enyakazisa umphefumulo, futhi nakakhulu ayekwazi ukuzwakalisa ukulangazelela kwabantu uNkulunkulu.” Ngabe sengiyeka lokho engangikwenza ngalalelisisa kahle, ngizwa elinye iculo elithi “Funa Kuphela Inhliziyo Ethanda UNkulunkulu”：“Angiceli lutho empilweni yami ngaphandle kokuthi imicabango yami yothando lukaNkulunkulu nezifiso zenhliziyo yami kwamukelwe nguNkulunkulu.” Ngacabanga ngathi, “Ubani owabhala leli culo? Kwenzeka kanjani ukuba isinqumo sakhe sibe sikhulu kangaka? Leli culo liyakhuthaza kakhulu kimina, futhi ingabe imsulwa kangakanani inhliziyo ethanda uNkulunkulu njengoba ikhuluma la mazwi, ‘Angiceli lutho empilweni yami ngaphandle kokuthi imicabango yami yothando lukaNkulunkulu!’ Ngaphambili, lapho ngikholwa eNkosini, ngangingazi ngokuthanda iNkosi, futhi ngangifuna nje kuphela ukuthokozela umusa, ukuthula nentokozo evela eNkosini. Namuhla, leli culo lavula kakhulu indlela engangibuka ngayo umhlaba, futhi ngabona ukuthi abantu abakholwa kuNkulunkulu kufanele bamthande uNkulunkulu, futhi akufanele bazifunele lutho futhi yilolu hlobo lothando kuphela olungaba msulwa. Leli culo liculwa kahle kakhulu.” Ngabe senginquma ngokuyimfihlo enhliziyweni yami ukuthi nami ngiyafuna ukufuna le mpokophelo, nokuthi ngangizothanda iNkosi nomkungakhathaleki ukuthi ubani owayengayithandi.
Ngokuphazima kweso, isikhathi sokutshala amasimu sase sifikile. Ngokunye ukuhlwa, umyeni wami wayeqoqaqoqa wase ethi kimi, “Kusasa, ngizophuma ngiyosebenza ebandleni elikwenye indawo.” Ngathi ngokushesha, “Uzokwazi yini ukubuya emva kwezinsuku ezimbalwa?” Wathi, “Angazi. Ngizozama konke okusemandleni ami ukuba ngibuye ngokushesha, ukuze ungakhathazeki ngomsebenzi wasendlini.” Lapho ngizwa lokho ayekusho, ubuso bami bahwaqabala, futhi ngacabanga, “Uthi ngingakhathazeki ngakho, kodwa ngingahlala kanjani ngingakhathazeki? Uyahamba futhi awazi nokwazi ukuthi uzobuya nini, futhi amasimu akwamanye amakhaya asetshaliwe vele. Eyethu insimu ayikalinywa nokulinywa, futhi uma imbewu itshalwe emva kwesikhathi, ekwindla ngeke sibe nesivuno esihle. Uma leso sikhathi sesifika, siyokwenzenjani? Ukube nje umyeni wami uqala ngokuqeda ukuhlwanyela insimu yakhe bese ehamba-ke ayosiza abafowethu nodadewethu!” Kusihlwa ngalo lolo suku, ngalala embhedeni wami bungafiki ubuthongo ngigcwele ukuyaluza kwenhliziyo okukhulu: Ngesikhathi egcina ukuhamba umyeni wami wahamba isikhathi esingaphezu kwengxenye yenyanga ngaphambi kokuba abuye, kepha kwakungesona isikhathi sokusebenza epulazini. Manje, isikhathi esibucayi somsebenzi wasepulazini sase sifikile, futhi uma ehamba enye ingxenye yenyanga, ngiyokwenzenjani? Ngingahle nje ngimyale ukuba ahambe ayofuna lowo asizana naye emsebenzini ukuba enze lo msebenzi nje kwaphela. Kodwa ngaphinde ngacabanga ngakho: “Lokho ngeke kulunge, njengoba abafowethu nodadewethu belindele yena ukuba azobasiza. Uma engahambi, ngeke yini lokho kube yicala eNkosini?” Esimweni sokucwengwa, ngeza ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ngathandaza: “Nkosi! Akukhona ukuthi angizimisele ukuba umyeni wami ahambe ayosiza abafowethu nodadewethu, ukuthi yisikhathi esifanele lapho umndeni wethu kufanele usebenze emasimini. Enhliziyweni yami, ngibhekene nokucwengwa okunzulu ngempela, futhi angazi ukuthi ngenzenjani. Nkosi! Ngicela usizo Lwakho, ukuba uvikele inhliziyo yami futhi ungangivumeli ukuba ngiphazanyiswe yilezi zinto.” Ngemva kokuthandaza, la mazwi angifikela ngokucace bha engqondweni yami: “Akunandaba ukuthi isimo sakho sangempela siyini, kumele uqale uzimisele ukubekezelela ubunzima kanye nokholo lweqiniso, futhi kumele uzimisele ukulahla inyama. Kufanele uzimisele ukubekezelela ubunzima nokulahlekelwa izinto ozithandayo ukuze ufeze intando kaNkulunkulu” (“Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Lawa mazwi masinyane ayibamba inhliziyo yami, futhi ayilethela ukukhanya okucacisayo: Kuyiqiniso lokho! Uma umuntu efuna ukwanelisa iNkosi, kumele anqume ukubekezela ubunzima futhi kufanele kunalokho abhekane nobunzima siqu sakhe futhi abe nokulahlekelwa kulokho akuthandayo ukuze anelise intando kaNkulunkulu! La mazwi anginika ukholo, futhi ngacabanga: Uma amasimu etshalwe emva kwesikhathi kancane, akusenani! Noma ngabe kungakanani esikuvunayo kusesandleni sikaNkulunkulu, futhi into ebaluleke kakhulu ngumyeni wami esebenzela iNkosi. Nginalokhu engqondweni, ngezwa ngilula futhi ngaba nokukhululeka enhliziyweni yami, futhi kwaba sengiyazumeka njalo. Ngakusasa ekuseni, ngathi kumyeni wami: “Khululeka uhambe uye emsebenzini weNkosi! Noma ngabe ubuya nini, akunandaba. Ngizothobela ilungiselelo likaNkulunkulu.” Lapho ngicabanga ngokuthi lokho engangikwenza kwakuyanelisa iNkosi, ngazizwa ngijabule futhi nginokuzinza enhliziyweni yami.
Okwedlule：Itabernakele LikaNkulunkulu Likubantu